Dowladda Sucuudiga oo Shaacisay magacyada iyo sawirrada ragii weeray masjidka Nabiga. – Radio Daljir
Dowladda Sucuudiga oo Shaacisay magacyada iyo sawirrada ragii weeray masjidka Nabiga.
Luulyo 9, 2016 1:56 b 0
(July 09 2016)-Wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga ayaa sheegtay in qaraxa ka dhacay magaalada Madiina agagaarka masjidka barakeysan ee uu ku aasan yahay Nebi Maxamed NNKH uu ka dambeeyey Naer Muslim Hamad Sacuudiyaan ah, waxaana arrimahaasi loo xiray ilaa 19 ruux.
Abdullah Waqar Khan oo ka soo jeeda dalka Pakistan ahaana 30 sano jir ayay wasaarada arrimaha gudaha Sacuudigu sheegtay inuu ahaa ninkii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay agagaarka qunsuliyada Maraykanka ee magaalada Jeddah, isaga keligii ayaana ku dhintay.
Qoraalka ka soo baxay wasaarada arrimaha gudaha Sacuudiga oo ay faafisay wakaalada wararka dalkaas ayaa lagu sheegay in saddex nin ay ka dambeeyeen weerar kale oo habeenimadii Isniinta ka dhacay magaalo la yiraahdo Qatif oo ku taalla bariga Sacuudiga taasoo ay degaan shiicada wadankaas, wasaaradu ma sheegin magacyada raggaas iyo iney sacuudiga u dhasheen iyo in kale.
Waraysi-Nabadoon Yaasiin C.samad oo kahadlay soo xulista golaha deegaanka Galkacyo.
DHEGEYSO-Taliska Booliska oo baaq u diray dhalinyarada Soomaaliyeed.